Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်များအနက် ပုံတွင်တွေ့ရသော လေယာဉ်ပစ်စစ်သေနတ်ကြီးများမှာ ရုရှားနိုင်ငံထုတ်
ZPU-1 နှင့် ZPU-2 ၁၄.၅မမ လေယာဉ်ပစ် စစ်အမြောက်များဖြစ်ပါသည်။
ဇက်ပီယူ-၁ ၁၄.၅မမ လေယာဉ်ပစ်စစ်သေနတ်ကြီး
ဇက်ပီယူ-၂ ၁၄.၅မမ ၂ပြောင်းပါ စစ်သေနတ်ကြီး
လေယာဉ်ပစ်စက်သေနတ်များ အပြင် တာတိုပစ်ခတ်ရန်အတွက် ဒုံးလက်နက်စနစ်များလည်း တပ်ဆင်ထားရာ ယခုတွေ့ရသော ပုခုံးထမ်းဒုံးများမှာ ရုရှားနိုင်ငံထုတ် IGLA ပုခုံးထမ်းဒုံးလက်နက်စနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ)ရှိ စစ်ရေယာဉ်များပေါ်တွင်လည်း လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဒုံးလက်နက်စနစ်များ တပ်ဆင်လာရာ ရရှိထားသော အချက်လက်များအရ အောင်ဇေယျ ဒုံးတပ်ဖရီးဂိတ်ကြီးအပြင် ၇၇စီးရီး ကော်ဗတ်များပေါ်တွင်လည်း ဒုံးစနစ်များတပ်ဆင်ထားသည်ဟု သိရပါသည်။
အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ပေါ်မှ ဒုံးလက်နက်စနစ်အား ပစ်ခတ်စမ်းသပ်နေစဉ်
တပ်မတော် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက်နက်စနစ်အား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တစ်ခုအတွင်း ပစ်ခတ်စမ်းသပ်နေစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် လေကာတပ်ဖွဲ့များအနေနှင့် တာတို၊တာလတ်၊တာဝေးရှိ ကျုးကျော်လာသော မည်သည့်ရန်သူ့ လေတပ်မဆို ပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်စေရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ရာ မြန်မာ့ဝေဟင်အား ကာကွယ်ရေးအတွက် အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
( အချက်လက်မှားများရှိပါက ပြောပေးကြပါဦးခင်ဗျာ...)
Posted by MM at 12:19 AM
kyawminnag May 9, 2012 at 1:36 AM
ဟီဟီဒီလက်နက်တွေကဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လဲပြတိုက်ထည့်သုံးဖို့ပဲကောင်းတယ်လေယာဉ်ပစ်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူ ၁၉၇၄ လောက်ကကြီးနဲ့တောင်ဗီယက်နာမ်မှာ c-75 ၊c-125 တို့သုံးနေပြီဒါတောင်မှအကျအရှူံးများသေတာဒီခေတ်မှာဒီလိုလက်နက်ကိုသုံးလို့ဘယ်လေယာဉ်သွားမှန်မှာလဲ ရွာကလည်းပစ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်မြန်မာလဲ c-300လောက်ဝယ်ထားရင်ကောင်းမှာ c-300 အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့စစ်သည်အရာရှိ၂သောင်းလောက်ရှိရင်လေကြောင်းရံကသူများနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်နိုင်တာပေါ့
MM May 9, 2012 at 8:03 PM
ဟုတ်ပါတယ်.... ဒိလက်နက်တွေနှင့် ခေတ်မှီတိုက်လေယာဉ်တွေကို ပစ်ချဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့သလောက်ပါဘဲဗျာ... ဒါပင်မဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကတော့ အတော်လေးကိုအသုံးဝင်နေဆဲပါဘဲ... အထက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒါတွေက တာတိုပစ် စက်သေနတ်စနစ်တွေဘဲလေ.. ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ Tunguska M1 တို့ TOR-M1 တို့ BUK-M2 တို့ရှိတာ ကျွှန်တော်တို့နိုင်ငံဘဲရှိပါသေးတယ်... S-300 တွေကို ဘာကြောင့်မတပ်ဆင်ထားသေးလည်း ဆိုတာကိုတော့ ကျွှန်တော်လည်းမသိပါဘူး... နောက်ပြီး ကျွှန်တော်တို့မသိတဲ့ ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ စနစ်တွေရှိနေပါဦးမယ်...
ko phone May 12, 2012 at 4:35 PM
Ko MM, in first picture, I notice Battle of SAGAING. Do you know anything about this?
MM May 14, 2012 at 1:41 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ စစ်ကိုင်းတိုက်ပွဲဆိုတော့ အရင် လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကသမိုင်းတွေ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ကျွှန်တော်လည်းအသေချာမသိဘူးဗျ..
aung May 15, 2012 at 5:48 AM
I don't think . can not use for internaional naval war.
rough patriot May 16, 2012 at 7:12 AM
စစ်ကိုင်းတိုက်ပွဲက ၁၉၄၃ ခုနှစ် ဘီဒီအေ လေယာဉ်ပစ်တပ်က အမေရိကန် ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် ၇စီးကို (၁) ရက်ထဲပစါချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေ အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ပွဲပေါ့
ko phone May 16, 2012 at 7:02 PM
thanks..rough patriot..something you don't normally see it on History channel and US air force history.
ဆင်ဖြူရှင် May 16, 2012 at 9:07 PM
ရုရှားတို့ရဲ့ S-300 စနစ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီစနစ်ဟာ ပေါ်တာ အလွန်ကြာပါပြီ၊ စစ်အေးခေတ်ကာလကတည်းကသုံးနေတာပါ
ခေတ်အလိုက် နည်းပညာတိုးတက်လာလို့ စနစ်ကိုအဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ထားတယ်ဆိုသော်လည်း အခြေခံစနစ်ကမပြောင်းလဲသေးပါဘူး အားနည်းချက်တွေရှိဆဲပါ
နောက်တခုကဒီစနစ်ကို စစ်ပွဲတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမရှိသေးလို့ တိကျမှုကမရေမရာပါ
ဆီးရီးယားတို့ရဲ့ လှို့ဝှက်နူကလိယစက်ရုံကို ၂၀၀၇ တုန်းက အစ္စရေးလေတပ်က ဗုံးကြဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်
အဲဒီအချိန်က ဆီးရီးယားတို့မှာ ဒီစနစ်ကိုရုရှားတို့ဆီကလက်ခံရရှိပြီးရုံမက တပ်ဆင်သုံးစွဲနေပါပြီ
သို့သော်လည်း အစ္စရေးတို့ရဲ့ F-15 နဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်
ရုရှားတို့ရဲ့စစ်လက်နက်တွေဟာ ခေတ်နောက်ကျပြီး လက်တွေ့မှာထင်သလောက်မထိရောက်ဘူးဆိုတာကို ဖောက်သည်အာရပ်နိုင်ငံတွေအသိဆုံးပါ
ရုရှားတွေကိုယ်တိုင်လည်း ၂၀၀၈ ရုရှား-ဂျော်ဂျီယာစစ်ပွဲမှာ ဒီလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ
ရုရှားတို့ရဲ့လက်နက်တွေဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ ညှိဘို့ဟန်ပြသာသာလောက်ဆိုတာ ဒီဘက်ခေတ်တွေမှာပိုသိသာလာပါတယ်
သို့သော်ရုရှားဟာ အမေရိကန် ပြီးရင်လက်နက်တင်ပို့မှု ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးနိုင်ငံပါ
ဒါကလည်းအမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ ကမိမိတို့နဲ့ အလွမ်းမသင့်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလက်နက်ရောင်းချမှုမပြုလို့ပါ
ခုထိလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အမေရိကနဲ့ဥရောပတို့က စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း စစ်လက်နက်တင်ပို့မှုနဲ့ စစ်ရေးပူးပေါင်းမှုတွေကိုတော့ဆက်လက်တားမြစ်ထားဆဲပါ
ဒီတော့ဒီနိုင်ငံတွေဆီက လက်နက်တွေဝယ်လို့မရသေးသမျှ ရုရှားလက်နက်တွေကို နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး အဟန့်အတားတခုအနေနဲ့ အသုံးပြုနေရအုံးမှာပါ
မေမြို့မိုး August 9, 2012 at 12:01 AM
ဒီလက်နက်တွေနဲ့ ခေတ်မီလေယာဉ်တွေကို ပစ်ချလို့မရဘူး လို့တော့ ကံသေ ကံမ ပြောလို့မရပါဘူး.။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာ အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ် အတော်များများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာ စက် အမြောက်နဲ့ စက်သေနတ်တွေပါ.။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ..အရင်က HN-5 ဆိုတဲ့ တရုတ်ထုတ် ပုခုံးထမ်းပဲ့ထိန်းဒုံးတွေကိုသုံးပါ
တယ်.။ နောက်ပိုင်းက န့်သတ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အတွက် SA-16 Igla တွေကို သုံးပါတယ်.။
အစပိုင်းမှာ ၀ယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ပေမယ်.။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါ
တယ်.။ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ.. အသုံးပြုတဲ့ aluminize RDX ယမ်းကလွဲပြီး ကျန်တာအကုန်လုံးကို ပြည်တွင်း
aungaung August 12, 2012 at 8:33 AM
ko MM ရေ (အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ပေါ်မှ ဒုံးလက်နက်စနစ်အား ပစ်ခတ်စမ်းသပ်နေစဉ်) video file ရှိလားဗျို့
MM August 13, 2012 at 1:43 AM
ရှိတယ်ဗျ... နောက်အဆင်ပြေရင်တင်ပေးပါ့မယ်... တချို့အပိုင်းလေးတွေက အကန့်အသတ်နှင့်မို့ပါ...။
aungaung August 15, 2012 at 4:55 AM
Thanks ko MgMg